मिले मोहनविक्रम बैद्य र विप्लव माअाेवादी, आन्दोलनको घोषणा ! – ToplineKhabar
मिले मोहनविक्रम बैद्य र विप्लव माअाेवादी, आन्दोलनको घोषणा !
December 21, 2016 December 21, 2016 प्रदीप भट्ट0Comment
काठमाडौं । माओवादीका गुरु मोहनविक्रमसिंहसँग बैद्य मोओवादी र विप्लव माओवादीले कार्यगत एकता भएको घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले माेहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल, क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा (माओवादी)ले आन्दोलन अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
माेहन विक्रम सिंह, माेहन बैद्य ‘किरण’ र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ माअाेवादीले कार्यगत एकता गरेको घाेषणा गरेका हुन् । किरण माेहन विक्रमका सहकर्मी हुन भने विप्लव सिंहकै स्कुलिङमा हुर्केका हुन् । उनी माअाेवादी जनयुद्धमा पश्चिम कमाण्डमा सफल थिए ।
माअाेवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई सिंहले अराजकताकाे सज्ञा दिने गर्दथे । प्रचण्ड नेतृत्वको एमाअाेवादीमा विभाजन भई वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माअाेवादी बनेकाे थियाे । त्यसबाट पनि विप्लव दुई वर्ष अघि अलग्गिएका थिए । भने भर्खरै रामबहादुर नेतृत्वमा ठूलाे केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड नेतृत्वको एमाअाेवादीमा एकता भई माअाेवादी केन्द्र बनिसकेकाे छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला भएकाे तीन पार्टीकाे कार्यगत एकतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
भारतीय विस्तारवादकातर्फबाट राष्टियतामाथिको आक्रमणविरुद्ध कार्यगत एकता गरी संयुक्त रुपमा संघर्षको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा तीनै पार्टीका प्रमुखहरुको हस्ताक्षण गरेका छन् ।
अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रम आगामी २०७४ वैशाख ९ गते संयुक्त रुपमा मनाउने तीन नेताले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । एभरेष्ट दैनिकबाट
← झन् चिढियो एमाले : प्रचण्ड र ओली, देउवा र बामदेववीच चर्काचर्की
मरुभूमिमा यसरी गरिन्छ पानीको खेती →
प्रचण्ड निवासमा एकाएक मसालका महामन्त्री देख्दा
संशोधन प्रस्ताव आज सदनमा पेश नहुने
June 17, 2018 प्रदीप भट्ट 0